ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိစေသတည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 17, 2006 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 8, 2011 Douglas Karr
ကျွန်တော်ကရိုမန်ကက်သလစ်ကြီးပြင်းလာတယ် လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားပြီးအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး၊ “ ငြိမ်းချမ်းပြီ။ ” လို့ပြောရရင်ဒီနေ့ငါအကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကတော့လူပဲ။ “ မင်းနဲ့အတူပါ”
အာရဗီဘာသာတွင် "As-SalÄ ?? mu Alaykum" “ Alaykum As-Sal-?? m” ဟုပြန်ကြားချက်။
ဟီဘရူးဘာသာစကားဖြင့်“ ရှာလုံ aleichem” ။ ပြန်ကြားချက်“ Aleichem shalom”
ပြီးတော့၊ ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီမှာမြန်ဆန်မှု၊ “ ငြိမ်းချမ်းရေး”၊ “ ဆလမ်” နဲ့“ ရှာလုံ” စသည်ဖြင့်ပေါ့။
၀ ိညာဉ်ရေးရာဆင်းသက်လာသောမောရှေ၏ဘာသာတရားအားလုံးကငြိမ်းချမ်းရေးဟူသောစကားလုံးနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နှုတ်ဆက်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပေလော။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရနိုင်သလော။
Del.icio.us Firefox အတွက် Plug-in
ဒီဇင်ဘာ 17, 2006 မှာ 8: 17 AM
ဧပြီ 16, 2007 မှာ 6: 23 pm တွင်
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သင်နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးသည်ကျွန်ုပ်၏ဝတ္ထုအသစ်၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကငါ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုငါအားလုံးကိုပြောတယ်
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 47
13:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 55 တွင်
လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားပြီးအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး 'ငြိမ်းချမ်းပြီ။ '
ခင်ဗျားရှင်းပြတာကိုကြိုက်တယ် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်